ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ - China Products Factory & Suppliers - အပိုင်း ၂
Resin Bond Diamond တွင်ပါဝင်မှုအနည်းဆုံးသော SND-R20 ပရီမီယံအဆင့်ပိတ်ဆို့ခြင်း
vitrified နှောင်ကြိုးများနှင့်ဗဓေလသစ်နှောင်ကြိုး (phenolic နှင့် polyimide) စနစ်များအတွက်အကြံပြုသည်။ Resin Bond စနစ်များကို phenolic (သို့) polyimide နှောင်ကြိုးများရှိအမျိုးမျိုးသော superabrasive ကြိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ Vitrified Bond စနစ်များကိုကြွေထည်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကြံ့ခိုင်ပြီးကြာရှည်ခံသည်။ Vitrified bond များသည်မြင့်မားသော porosity ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းဇုန်တွင်အပူဖြစ်ပေါ်မှုလျော့နည်းစေနိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အဆင့်မြင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်ထိရောက်သည်။
SND890 အရည်အသွေးမြင့်စိန်လက်မှုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဒြပ်စိန်အမှုန့် Synthetic Industrial Diamond Powder 2. SND890 ၏ SinoDiam SND890 သည်ပုံမှန် Cube-octahedron ပုံသဏ္withာန်ရှိသောဒြပ်ပြုလုပ်ထားသောစိန်ခြစ်ရာဖြစ်ပြီးစိန်ပင်မ -bits သည်စိန်ပင် နှင့်စိန်ဝါယာကြိုး။ 3. Saw Grit စိန်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက် SND890 20 / 25-45 / 50 SND880 20 / 25-70 / 80 SND860 20 / 25-70 / 80 ပုံမှန်အပူနှင့်အတူပုံမှန်ပုံသဏ္...ာန် ...
ပြည့်စုံသောပုံသဏ္andာန်နှင့်ကြည်လင်သော Crystal Edges များဖြင့် SND880 စက်မှုစိန်အမှုန့်များ
SND880 စက်မှုလက်မှုစိန်အမှုန့်အပြည့်အစုံနှင့်ကြည်လင်သော Crystal Edges များရှိသည့် Synthetic Industrial Diamond Powder ၂။ SND880 SinoDiam ဒြပ်ပြုလုပ်ထားသောစက်မှုစိန်အမှုန့် SND880 သည်စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ စိန်ခြယ်မှုန်းခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်စိန်ပွင့်ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲကွန်ကရစ်များနှင့်ကျောက်တုံးများအပေါ်ဝါယာကြိုး။ ရရှိနိုင်သည့်အရွယ်အစားမှာ ၂၀ / ၂၅-၇၀ / ၈၀ ဖြစ်သည်။ ၃။ Saw Grit Synthetic Diamond Powder ရရှိနိုင်သည့်အရွယ်အစား 20/25 25/30 30/35 35/40 40/45 45/50 50/60 ...
SND860 ဒြပ်ထုပစ္စည်းများနှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက်ဒြပ်စိန်အမှုန့် ၁။ SND860 ၏စရိုက်လက္ခဏာများစိန်ပွတ်မှု SND860 သည်အလတ်စားမှမြင့်မားသောမာကျောမှု၊ blocky crystal ပုံသဏ္,ာန်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှမြင့်မားခြင်းနှင့်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအတော်လေးမြင့်မားသောအပူတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ စိန် sawing tools များနှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ tools တွေကိုများအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ 2. Saw Grit စိန်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက် SND890 20 / 25-45 / 50 SND880 20 / 25-70 / 80 SND860 20 / 25-70 / 80 ပုံမှန်အပူနှင့်အတူပုံမှန်ပုံသဏ္...ာန် ...
SND840 ဒြပ်ပေါင်းစိန်အမှုန့်များသည်အလယ်အလတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်အပူတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ စက်မှုဆိုင်ရာစိန်အမှုန့် ၂ ။ အလယ်အလတ်အရည်အသွေးရှိသောစိန်ဓါး၊ အဓိကအပိုင်းအစများ၊ ကျောက်ပြားနှင့်ကွန်ကရစ်များအတွက် electroplate စိန်ကိရိယာများကိုပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၃ ။
SND830 ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများအတွက် Synthetic Diamond Diamond Powder Loading Synthetic Industrial Diamond Diamond Powder ၂။ SND830 စိန်အမှုန့်အနိမ့်အမြင့်မှအလတ်စားခိုင်မာခြင်း၊ Semi-blocky ပုံသဏ္,ာန်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအနိမ့်နှင့်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနည်းသည်။ ယေဘုယျအသုံးပြုမှုအတွက်စိန်ဓါးသွားသို့မဟုတ် girnding ဘီးအောင်များအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ 3. Saw Grit Synthetic Diamond Powder ရရှိနိုင်သည့်အရွယ်အစား 20/25 25/30 30/35 35/40 40/45 45/50 50/60 60/70 70/80 SND820 √√√√√√√√ ...
SND820 အနိမ့်ကြမ်းတမ်းသောဒြပ်ဒြပ်စိန်အမှုန့်များမြင့်မားစွာထိရောက်မှုနှင့်အတူ 1. ဒြပ်စိန်အမှုန့် 2. SND820 ၏ဇာတ်ကောင်နိမ့်ခိုင်မာခြင်း, နှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်ပုံသဏ္,ာန်, င့်လင်းမြင်သာမှုနိမ့်, သက်ရောက်မှုခုခံနိမ့်ခြင်းနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှု။ အလတ်စား - နိမ့်ဝန်နှင့်အတူစိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကြိတ် tools တွေကိုအောင်များအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ၃။ အခြားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစိန်ပွင့်သတ်မှတ်ချက် SND890 20 / 25-45 / 50 SND880 20 / 25-70 / 80 SND860 20 / 25-70 / 80 ပုံမှန်ပုံသဏ္shapeာန် ...